म आगामी नेतृत्वको लागि तयार छु::Daily Newspaper of Nepal
२८ बैशाख २०७६, शनिबार ००:४५
म आगामी नेतृत्वको लागि तयार छु
प्रमुख रुपमा गैर आवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) को मुख्य दायित्व भनेको निर्माणाधिन अवस्थामा रहेको आफ्नै कार्यालय भवन सम्पन्न गरि सचिवालय संचालन गर्नु पर्ने, त्यसै गरि २०७२ सालको भुकम्पको केन्द्र बिन्दु रहेको गोरखाको लाप्राकमा ५७३ वटा घरहरु निर्माण गरि नमुना बस्ती बनाउनु पर्ने र काठमाडौंको शंखमुलमा रहेको एनआरएनए पार्कको परियोजना सम्पन्न गर्नु पर्ने कार्यभार हाम्रो काँधमा रहेको हुँदा उक्त कामहरु सम्पन्न गर्नेमा केन्द्रित भयौं । त्यसका अलवा बिभिन्न क्षेत्रमा हुने सम्मेलन तथा बिज्ञ सम्मेलनहरु गरि कार्ययोजना बनाउने नै हाम्रो प्रमुख कार्यभार हो अहिले ।
म उपाध्यक्षमा निर्वाचित भईसके पछि मेरो जिम्मेवारीमा निर्माणाधिन एनआरएनए भवन सम्पन्न गर्नु पर्ने थियो । उक्त कार्य सम्पन्न गरि गत डिसेम्बर महिनाबाट एनआरएनए को सचिवालय आफ्नै भवनमा संचालन भईरहेको छ । त्यसै गरि अर्को जिम्मेवारी भनेको बिभिन्न मुलुकमा छरिएर रहेका नेपाली बिज्ञहरुलाई एकै स्थानमा भेला गरि बिज्ञ सम्मेलन गर्नु पर्ने मलाई जिम्मेवारी थियो उक्त काम पनि मैले सफलताका साथ सम्पन्न गरि आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गरेको छु । संगठनले जिम्मा दिएका सबै काम ईमान्दारिताका साथ पुरा गरिरहेको छु ।
बिभिन्न मुलुकामा हामीले अन्तराष्ट्रिय सम्मेलनहरु सम्पन्न गरि सकेका छौं । अव अष्ट्रेलियामा रहनु भएका गैरआवासीय नेपाली साथीहरुले प्राप्त गर्नु भएको ज्ञान सीप र बिद्यतालाई नेपाल भूमिको लागि उपयोग हुने गरि ओशिनिया सम्मेलनको आयोजना गरिएको छ । यसबाट साथीहरुले धेरै क्षेत्रमा छलफल वहस र लगानी गर्ने बिषयमा छलपल गरि निर्णय गर्नु हुनेछ । अष्ट्रलियामा रहनु भएका साथीहरु धेरै प्रबुद्ध वर्ग हुनुहुन्छ । त्यस कारण पनि ओशिनिया सम्मेलन हामीहरुको हितमा छ र यसले धेरै महत्व राख्छ । एनआरएनए साथीहरुले अष्ट्रेलियामा रहेर धेरै ज्ञान सिप आर्जन गर्नु भएको यो सम्मेलनमा उक्त विषयहरुको पनि आदान प्रदान हुनेछ भन्ने हामी विश्वस्त छौं ।
एनआरएनए केन्द्रले तेस्रो ओसेनिया सम्मेल लाई कतिको महत्वका साथ हेरेको छ ?
ओसेनिया सम्मेलन आफैमा बहु आयामिक र एनआरएनएको ईतिहासमा महत्वपुर्ण स्थान लिन सफल सम्मेलन हो । अष्ट्रेलियमा रहनु भएका एनआरएनएका सबै साथीहरु मेहनती र ईमान्दार हुनुहुन्छ । यस सम्मेलनमा आफुले जाने बुझेका ज्ञानसीप नै आदान प्रदान हुने भएको हुँदा एनआरएनए र नेपाल देशलाई नै महत्वपुर्ण योगदान पुग्ने विषयमा म विस्वास दिलाउन चाहन्छु ।
एनआरएनएले ओसेनिया क्षेत्रमा रहेका नेपालीलाई प्राथमिकता दिएको छ ?
निश्चय पनि एनआरएनए भनेको सबै बिदेशमा रहनु भएका नेपालीहरुको साझा घर हो । यो भित्र को आफ्नो को बिरानो भन्ने विषय नै छैन । चाहे त्यो पुर्वमा रहेका नेपाली हुन वा पश्चिममा रहेका नेपाली हुन सबै बराबर हुन । त्यस कारण ओसेनिया क्षेत्रमा रहेका नेपाली रहेका नपालीहरु एनआरएनए को प्रम्ख हिस्सा हो ।
अझै पनि एनआरएनएलाई धनीको मात्रै सस्था भन्ने गरिन्छ यहाँको कार्यकालमा यहाँले ओसेनियामा रहेका नेपाली बिधार्थीको लागि के के गर्नु भयो ?
यो धनिहरुको मात्र संस्था हो भन्ने आरोप झुटो हो । उक्त विषय उठ्नुको कारण हाम्रा सामु धेरै परियोजनाहरु सम्पन्न गर्नु पर्ने चुनौती थियो । उक्त समयमा हामीहरु आर्थिक रुपले सवल साथीहरुको साथ खोज्न लागे कै हौं सोही बिषयलाई त्यस्ता हल्ला गरिए यो दुखद् विषय हो । नेपालमा विकास गर्नको लागि हामीले भिजन २०ः२० लाई आधार मानेर काम गरि रहेको अवस्था र विकास निर्माणको कामलाई तिब्रता दिने क्रममा यस्ता विषय उठेका हुन् । तर यथार्थमा त्यस्तो होईन । मेरो कार्यकालमा ओसेनिया क्षेत्रमा रहेका बिद्याथीहरुको लागि धेरै प्रयासहरु गरिएका छन् । विशेष गरि बिद्यार्थीहरुका सहज अध्ययन र भिषाका समस्याहरुलाई सहज बनाउने बिषयमा प्रम्ख काम भएका छन् ।
लाप्राक परियोजनाको काम सकिएको अवस्था छ । हामीले नमुना बस्ती निर्माण गरि सकेका छौं । हामीले समुदायमा हस्तान्तरण पनि गरिसकेकाा छौं ।
एनआरएनले नेपालमा अक्टोवरमा विज्ञ सम्मेलन सम्पन्न गर्यो यसले प्रवासमा बस्ने नेपालीलाई के फाईदा पुर्यायो त ?
विज्ञ सम्मेलन निश्चित रुपमा प्रवासमा रहनु भएका नेपालीहरु कै लागि आयोजना गरिएको थियो । बिज्ञ सम्मेलनबाट निर्णय गरि स्वेत पत्र नै जारी गरि हामी कार्यान्वयनको चरणमा छौं । उक्त सम्मेलनमा छलफल भएका विषयहरुलाई कार्यान्वयन गरि यथा सक्य छिटो परिणाम मुखी बनाउने तर्फ लागेका छौं । यस विषयमा ढिलाई हुने छैन ।
यहाँ अहिले एनआरएनए उपाध्यक्षमा दुई कार्यकाल समाप्तिको नजिक हुनुहुन्छ अब यहाँको गन्तब्य कहाँ हुन्छ एनआरएनएमा ?
मेरो एनआरएनमा लामो यात्रा र अनुभव छ । म महासचिव भई काम गरिसको र योसहित दुई कार्यकाल त उपाध्यक्ष नै भएर काम गरि सकें । वरिष्ठताको हिसावले पनि म अगाडि भएको हुँदा पक्कै पनि म आगामी नेतृत्वको लागि तयार छु । यसमा पनि अझ संसार भरिका एनआरएन साथीहरुको अनुरोधलाई पनि मध्यनजर गर्दै म आगामी नेतृत्वको लागि तयार छु तर यो औपचारिक घोषणा भने होईन । औपचारिक घोषणा पछि गर्नेछु ।
अन्तमा ओसेनिया सम्मेलनको बारेमा केहि बताईदिनोस न ?
यो ओसेनिया सम्मेलन तपाई हामी प्रवासमा रहेका एनआरएनहरुको लागि नै हो । यस कारण पनि हामी सक्रिय रुपमा सहभागी हुनु पर्छ र गहकिला विषयहरुमा छलफल र वहस गर्नु पर्छ । यसबाट एनआरएन र नेपाल देशलाई नै फाईदा हुन्छ । अन्त्यमा यो सम्मेलन सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्दछु ।